May 2, 2021 - Babal Khabar
May22021 by EditorNo Comments
काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिषर अगाडी प्रदेश सांसद र प्रहरीबीच झडप भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको सपथग्रहण अगाडी भएको झडपमा केहि सांसदहरू घाइते समेत बाहेक छन् । रोचक त के छ भने सांसदविरुद्ध प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुनै हातपातमा उत्रेका थिए । डिआइजीले सांसदहरूको कपालमा समातेर लछारपछार पारेको बताइएको छ । झडपमा सांसद लौटी थारुसहित केही सांसद सामान्य घाइते भएको बताइएको छ । नियुक्ती नहुँदै अल्पमतमा परेका शंकर पोखरेललाई सपथ खुवाउन जान भन्दै प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट निस्कन लाग्दा विपक्षी दलका सांसदले रोक्न खोजेपछि झडप भएको हो। विपक्षी दलका सांसदहरु दिउँसोदेखि ने संविधान विपरित भएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्तीलाई रोक्नु पर्ने भन्दै सपथ कार्यक्रम गर्न नदिने भनेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिषरमा धर्नामा थिए। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सपथ हुन नसक्ने ठानेपछि शंकर पोखरेललाई निवा
सरकारले संकटकाल लगाउने संकेत देखायो(यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था)
काठमाडौं, १९ वैशाख । कोरोना भाइरसको महामारी सरकारका लागि संकटकाल लगाउने बहाना बन्न सक्ने देखिएको छ । कुनैपनि बेला संकटकालको कदम चालिने संकेतहरु देखिएको छ । नेकपा एमालेले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकारहरु देखि केन्द्र सरकारमाथि संकट बढिरहँदा त्यसलाई टार्न पनि संकटकाल लाग्न सक्ने देखिएको छ । संकटकाल लगाएर कम्तिमा एक महिना सरकारले आफूमाथिको संकट टार्न सक्ने अवस्था रहन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संकटकाल लगाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसका लागि कुनैपनि बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आग्रह समेत हुनसक्ने बुझिएको छ । संकटकाल लगाउन परिस्थितिले पनि साथ दिएको छ । संविधानको धारा २७३ अनुसार संकटकालीन व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । जस अनुसार ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह् आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको
नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण,स्थिति डरलाग्दो बन्दै हेर्नुहोस् काहा कतिमा संक्रमण भयो?
काठमाडौँ — नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन् । आइतबार एकै दिन ७ हजार १ सय ३७ जनामा कोरोना पुष्टि हो । यसअघि गत कात्तिक ५ गते ५ हजार ७ सय ४३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको १६ हजार १ सय ४७ पीसीआर परीक्षणबाट आइतबार ७ हजार १ सय ३७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख ३६ हजार ३० पुगेको छ । २४ घण्टामा १६ सय १२ जना डिस्चार्ज भएका छन् । यो सँगै निको हुनेको संख्या २ लाख ८३ हजार ९ सय ९४ पुगेको छ । २४ घण्टामा २७ जनाको मृत्यु भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ३ सय २५ पुगेको छ ।हालसम्म पीसीआर परीक्षण २५ लाख ४४ हजार ७६ पुगेको छ । आइसोलेसनमा ४८ हजार ७ सय ११ र क्वारेन्टाइनमा ६७ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । साभार : ekantipur
लकडाउनमा घरमै थुनिएका बालबालिकाको मानसिकतामा यस्ता असर पर्न सक्छ,अभिभावकले गर्नै पर्ने कर्तब्य यस्तो छ : मनोविद गोपाल ढकालको निकै महत्वपूर्ण सुझाव (भिडियो हेर्नुस्)
पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शंकर पोखरेल शपथ नलिँदै यसरी अल्पमतमा परे
लुम्बिनी प्रदेश सभाको फेरिएको अंकगणित काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका शंकर पोखरेल शपथ नलिँदै अल्पमतमा परेका छन् । आइतबार बिहानै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका पोखरेल दिउँसो पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अपराह्न ५ बजेका लागि शपथ तय भएको थियो । तर, एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद र तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित सांसदले माओवादी केन्द्रमा जाने निर्णय लिँदा पोखरेले अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको शक्ति संघर्षमा आइतबार बिहानै नाटकीय रूपमा मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेलले राजीनामा दिए । उनीविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा दिँउसो छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो । तर, उक्त छलफल पहिल्यै पोखरेलले राजीनामा दिने निर्णय लिए । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष मुख्यमन्त्रीबाट दिएको राजीनामासँगै पोखरेलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेश
नेकपा एमालेको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक सकिनासाथ प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न किन पुगे शीतलनिवास पुरा पढ्नुहोस् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक सकिएको छ । एमालेले बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो । बैठक सकिनासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास गएका छन् । बैठकमा भएको छलफल तथा निर्णय बाहिर आइसकेको छैन । बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री शीतल निवास पुगेको स्रोतले बताएको छ । साभार :pathivara news
अस्ट्रेलियाले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्किएमा ५ वर्ष जेल सजाय र ६६ हजार अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्ने
स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेग हन्टले मंगलबारदेखि लागू हुने नयाँ नियम अस्ट्रेलियाली र अन्य देशका नागरिकका लागि समान हुने बताएका छन् । क्रिकेटरसमेत फर्कन नपाउने अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्किएमा ५ वर्ष जेल सजाय र ६६ हजार अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका कारण कम्तीमा १४ दिन भारतमा बसेको कुनै पनि व्यक्ति अस्ट्रेलिया आए उक्त सजाय गरिने अस्ट्रेलियाली स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेग हन्टले बताएका छन् । यही मंगलबारदेखि सुरु हुने यो नयाँ नियम कोरोनाकै कारण लागू गरिएको विश्वकै कडा नियम भएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आजसम्म कुनै पनि रास्ट्रले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्किएमा जेल सजाय हुने वा जरिवाना हुने नियम लागू गरेका छैनन् । तर हन्टले उक्त नियम अस्थायी भएको र अस्ट्रेलियाली नागरिक वा अन्य देशका नागरिकलाई समान भएको बताए । सरकारले
नेपाल चिकित्सक संघले कोभिड महामारीमा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै डरलाग्दो चेतावनी
१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले कोभिड महामारीमा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालिले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकाले अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था आएको बताएको थियो । चिकित्सक संघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारकै भएको र महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताएको छ । संक्रमितहरुको उपचारका क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वयं संक्रमित भइरहेको भन्दै चिकित्सक संघले उनीहरुको उद्धार, उपचार र व्यवस्थापन गरी महामारीको अन्त्यसम्म उपचार दिनसक्ने वातावरण तथा जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मागसमेत गरेको छ । साभार : onlinekhabar
एमसिसीको विषयमा गलत प्रचार नगरी संसदबाट छिट्टै पास गर्नु पर्छ । : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का विषयमा गलत प्रचार भएको बताएका छन्।आफ्नै निवासमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै देउवाले संसदबाट पास गराउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सघाउने भनेको सुनाउँदै एमसिसी नेपालकै हितमा भएको दाबी गरे ।‘एमसिसी मैले मात्रै भनेको होइन, यो सुशील कोइराला र बाबुराम भट्टराईकै पालादेखि आएको हो,’ देउवाले अघि भने, ‘यो केवल ग्रान्ट हो । सित्तै दिएको हो । यसमा ब्याज तिर्नुपर्दैन, यो ऋण होइन । तर, नराम्रो हल्ला फैलाइएको छ । अमेरिकी सेना आउँछ भनिएको छ । मैले सेना ल्याउन दिन्छु होला ? झुटा प्रचार गरेर हुन्छ ?’ देउवाले पार्टीमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सधैँ आफूलाई आरोप मात्रै लगाउदै आएको गुनासो गरे । तर, कांग्रेसमा बोल्ने छुट भएको उनले बताए । तपाईंले नयाँ सरकार बनाउने कुरादेखि पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा पनि लिंगरिङ गर्नुभय